eNasha.com - कर्णको अभियान
सानो झुण्ड तर कुनै पार्टीको झण्डा छैन । त्यसैले पनि यो झुण्डको कुरामा मानिसहरुले शायद चाख दिएका छैनन् । करिब दिउँसोको एक बज्यो, अँ केही मान्छेहरु भीड देखेर चासो देखाउन थाले । तर यो के ? फेरि फर्कँदैछन् ? चासो दिएनन् ? खैर केही छैन । एक जना फुच्ची कार्यकर्ता कर्तव्यबोध अभियान २००७ लेखेको सानो पुस्तिका हातभरि लिएर वरिपरि केही व्यक्तिलाई बुझाउन खोजिरहेकी छिन् । केहीले बुझेको अभिनय गरिरहेका पनि छन् तर जब त्यो पुस्तिका किनेर सहयोग गर्न भन्छिन्, आधा मान्छे गायब भइरहेका छन् । ती कार्यकर्ताको अनुहारमा स्पष्ट दिक्दारी देखिन्छ ।
यो दृश्य हो हिजो शनिबार रत्नपार्क-भोटाहिटी खण्डको । कर्तव्यबोध अभियान २००७ अहिले जनतालाई कर्तव्य बुझाउने अभियानमा जुटिरहेको छ । यसका संस्थापक हुन्, चर्चित पुस्तक 'सोच'का लेखक तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा लागिपरेका समाजसेवी व्यवसायी कर्ण शाक्य ।
सबैको मुखमा झुण्डिएको छ, नयाँ नेपाल । यतिबेलै सबैलाई सरकारबाट केही न केही चाहिएको छ । तर सरकारसँग सीमित साधन र श्रोत छ । भएका साधन र श्रोत पनि बेलाबेलाका बन्द र हडतालका कारण उपयोग हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा खाली सरकारसँग मात्रै अधिकार खोजिरहने कि आफूले गर्न सक्ने सानातिना कर्तव्य पनि निभाउने ? भन्ने प्रश्न अघि तेर्‍स्याएर व्यवसायी शाक्यले यो अभियान शुरु गरेका छन् ।
पुरानो गुणरत्नमाला तपाइँले पढ्नु भएको छ ? तपाइँले पढ्नु नभएको भए पनि तपाइँको आमा या हजुरआमाले त पक्कै पढ्नु भएको हुनसक्छ ! त्यो पुस्तकको विशेषता के छ भने त्यसमा छोरीको कर्तव्य, बुहारीको कर्तव्य, सासु-ससुरा तथा छोराको काम आदिका विषयमा गम्भीरतापूर्वक सिकाइएको छ । यो पुस्तक धेरै वर्षसम्म पहाडी जिल्लाका छोरी-बुहारीबीच निकै लोकप्रिय रहृयो । त्यो किताब चाहिँ कवितात्मक छ, पूरापूर अनुप्रास मिलाइएको !
बीचमा यो प्रसङ्ग कसरी छिर्‍यो भन्नुहोला भने शाक्यको यो अभियान पनि छोराको कर्तव्य के ? सासु-ससुराको बुहारीमाथि गर्ने कर्तव्य के ? त्यस्तै बुहारीले सासुससुरामाथि के गर्ने ? एउटा सभ्य नागरिकले के गर्ने ? देखिलिएर छिमेकी, सरसफाई, धर्मसंस्कृतिपर्यटन, प्रशासन, सामाजिक, राजनैतिक, यातायात र ट्राफिक, संरक्षण र विकासका बारेमा ११७ वटा बुँदागत कामका बारेमा बुझाइएको छ । काम कसरी गर्ने र कसरी भइरहेको छ भन्ने छर्लङ्ग पार्न यो पुस्तिकाले सघाउ पुर्‍याउँछ । एक किसिमले यसलाई आधुनिक गुणरत्नमाला भनेर चिन्दा हुन्छ । तर यो काव्यिक तरिकाले लेखिएको छैन, अनुप्रास र छन्द मिलाइएको छैन ।
यस अभियानमा उनलाई सघाउन निर्मलकुमार थापा, विभोर बराल, वर्षात् पाठक, दिवा राई, लक्ष्मी खतिवाडा, टङ्क ढकाल, इन्द्रारानी राई, विनोद ढकाल, सम्पदा मल्ल, नगेन्द्र लम्साल, सिलु अधिकारी, रविजंग ढकाल, ज्वाला अर्यालजस्ता युवाहरु लागिपरेका छन् । त्यस्तै यो समूहमा रुकमणि रिमाल, सुधा रिमाल, कपिलदेव खतिवडा, गीता आचार्य, शारदा मल्ल, बि.के. दलित, रविन्द्रसिंह बानिया, यज्ञरत्न शाक्य र विमल सुवेदी पनि छन् ।
अभियानमा हालै सामेल भएका कलाकार मनोजकुमार आर.सी. (उनी लक्ष्य चलचित्रका मुख्य पात्र थिए), यसमा सहभागी हुन पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानिरहेका छन् । उनी टीएनडब्लु (टीम फर नेचर एण्ड वाइल्डलाइफ) संस्थाका सक्रिय सदस्य पनि हुन् । डेढ महिनाअघि स्थापित यो संस्था पनि शाक्यको कर्तव्यबोध अभियानमा सघाउन लागिपरेको छ ।
पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएपछि अब उनीहरु विभिन्न विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुलाई के गर्न हुने र के नहुनेबारे सिकाउने छन् । आखिर तिनीहरु नै हुन् हाम्रो भविष्य !
सेलेब्रिटी संविधानसभा माओवादी awards पेट्रोल हल्ला समलिङगी मोबाईल अनुभव crisis hi-life streets celebrity festival events